Saameeyn intee la'eg ayay AMISOM ku yeelan doontaa kala Guurka UK & Midowga Yurub?
Home Somali News Saameeyn intee la’eg ayay AMISOM ku yeelan doontaa kala Guurka UK &...
Saameeyn intee la’eg ayay AMISOM ku yeelan doontaa kala Guurka UK & Midowga Yurub?
Dowladda Britain oo sannadkii hore ka baxday urur-weynaha EU-da ayaa waxay ka fekeraysaa sidii ay u maarayn lahayeen Dhaqaalaha ay ku taageeraan Hawlgalka AMISOM.
Isbuucii hore, Duqii hore ee magaalladda London, haatanna ah Xoghayaha Arrimaha Dibedda ee UK, Boris Johnson ayaa booqasho hawleed ku yimid dalalka Bariga Afrika, wuxuuna booqsho ku soo kala bixiyey Somalia, Uganda, Kenya iyo Ethiopia.
Sidoo kale, Wafdi heer sare ah oo ay hoggaaminayso Madaxa Siyaasadda iyo Ammaanka ee EU-da, Federica Mogherini iyo Madaxa Iskaashiga Caalamiga ee EU-da, Neven Mimiuca ayaa booqasho ku maraya Geeska Afrika, waxayna shalay joogeen magaalladda Addis Abeba, oo ay kula kulmeen Guddoomiyaha cusub ee Ururka Midowga Afrika, Moussa Faki Mohamed.
Wafdiga EU-da waxay ku dhawaaqeen Deeq Lacageed oo dhan 165 million oo Dollar oo logu talagalay in loo adeegsado Hawlaha Samafalka ee lagu gargaarayo dadka ku macluulsan dalalka Somalia, South Sudan iyo kuwo kale.
Safarka Diplomaasiyadeed ee UK iyo EU ku joogaan Heeska Afrika, waxaa laga dareemi karaa Loolan ku aadan Kasbashadda Dowladaha Geeska Afrika.
Laakiin, Dowladda Britain ayaa sheegtay inay garwaaqsadeen dib-u-eegista Maalgelinta ay ka dhiibaan Lacagaha Qaaraanka ee lagu socodsiiyo Hawlgalka AMISOM ee Somalia.
Saadaasha noocaasi ayaa laga dareemay Kulankii Xoghayaha Arrimaha Dibedda ee UK, Boris Johnson iyo Madaxweynaha Uganda, Yoweri Kabuta Museveni habeenkii Arbacadda ku yeesheen Aqalka Madaxtooyadda ee Entebbe.
Kulankaasi oo ahaa mid albaabadda u xirnaa Labada Mas’uul, ayaa waxay Saxaafadda Uganda heleen xogo hoose oo muujinaya inay Dowladda Uganda dib u eegayso Qaaraanka ay siiyaan AMISOM.
Ilo-wareedyo ka qeyb galay Shirkaasi oo la hadlay Wargeyska Daily Nation ayaa sheegay inuu Xoghayaha Arrimaha Dibedda ee UK mar kale ku celiyey Taageeradda ay siiyaan Hawlgalka AMISOM iyo wadiiqad kasta oo lagu hubinayo Nabadda Somalia.
Tan iyo markii ay UK iyo EU kala guureen sannadkii hore, waxay UK doonaysay inay Siyaasad u gaar ah taageero kaga geystaan Arrimaha Caalamka
Taageeradda UK ee Uganda oo xubin ka ah Dowladaha Barwaaq-sooranka ee Commomwealth iyo AMISOM oo loo arko mid iyaga kja midah.
Go’aanka Kama-dambaysta ee Dowladda UK ee Hawlgalka ayaa la hakiyey , waxayna ilo-wareedyo sheegayaan in looga dhawaaqi doono Shirweynaha ay UK marti-gelinaysobisha May 11-da oo looga hadlayo Shirweynaha Arrimaha Somalia.
Xoghayaha Arrimaha Dibedda ee UK, Boris Johnson waxa uu Kampala ka sheegay inay go’aansadeen inay ka baxaan EU-da, balse, taasi micnaheedu ahayn inaan ka tagayno Europe.
Waxa uu intaasi ku daray inay weli iskaashi ka leenahay Ganacsiga, Deganaanshaha iyo Barwaaqada.